ECN Forex Trading | Mahasoa amin'ny ECN / STP Forex Trading amin'ny FXCC
Home / About / About FXCC / Ny Model Business
Tahaka ny ECX mpikaroka broker FXCC Tsy misy biraon'ny fiatoana. Ny modely momba ny fandraharahana dia mifototra amin'ny Direct Processing (STP) ao anaty tambajotra nomerika elektronika, miresaka an'io ho modely momba ny varotra ECN / STP FX. Ny modely ara-barotra ECN / STP dia tontolo iray izay nandefasana ny baikon'ny mpanjifantsika rehetra any amin'ireo toeram-pivarotana ara-bola mahomby sy mahafeno fepetra, mba hifanaraka. Ity dobo filaminana misy hajaina ity dia manangana ny dobo misy ny mpamatsy vola. Ity tsotra sy mivantana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ity dia manafoana ny mety ho an'ny vidim-piainana na ny fanodikodinam-panafody, ary manome toky fa tsy misy fifandonana mahaliana eo amin'ny FXCC ho toy ny mpividy ary ny mpanjifantsika.
Ny FXCC dia mino fa ny fananana mpamatsy vola maromaro dia iray amin'ireo tolotra fototra indrindra azontsika atolotra ny mpanjifantsika amin'ny tsenam-bola forex. Vokatr'izany, nanangana fifandraisana matotra amin'ny ankamaroan'ny ankamaroan'ny mpikaroka izahay: ny fikambanana ara-bola azo itokisana, mendri-panajana ary napetraka, mba hahazoana antoka fa handray soa avy amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa ny mpanjifa miparitaka ny forex misy 24-5, na dia mandritra ny fivarotana tsena aza ary rehefa avoaka ny angon-drakitra sy ny famoahana vaovao.
Ny FXCC Price Aggregator dia manara-maso mandrakariva ny vidin'ny Bid / Ask (mividy sy mivarotra) rehetra miditra amin'ny tranonay ECN rafitra ary maneho tsy tapaka ny fialan-tsasatra tsara indrindra amin'ny fanomezana avy amin'ny mpamatsy vola. Izany dia miantoka ny mpividy ny tombontsoa amin'ny lalao tsara indrindra amin'ny Bid / Ask ny vidiny azo raisina bola ara-toekarena. Izany rafitra fanangonana izany dia mamorona tontolo iainana matihanina ho an'ny mpivarotra na inona na inona ny traikefany ary manolotra bebe kokoa ny varotra mahasoa.
Famintinana ny modelin'ny varotra FXCC.
Ny FXCC dia manome ny mpanjifany manana fidirana mivantana amin'ny modely forex ECN, izay ahafahan'ny mpanjifa mahazo ny fidirana mitovy ihany, ho an'ireo tsenam-barotra mitovy amin'izany, izay anaovana ny raharaham-barotra tsy misy hatak'andro, tsy misy fanemorana, na fanadihadiana indray.
Tsy sahala amin'ireo mpikarakara ny birao fandatsaham-barotra, ny FXCC dia tsy mandray ny lafiny hafa amin'ny varotra mpanjifa. Tsy manohintohina ny mpanjifa isika: ny baiko, ny fijanonana na ny fetra ary ny varotra rehetra dia atao any aoriana mivantana miaraka amin'ny antoko mpanohitra ao amin'ny dobo misy ny mpamatsy vola.
Ny raharaham-barotra amin'ny modely ECN / STP dia mitoetra tsy mitonona anarana, ny mpamatsy amin'ny liquidity dia mahita ny baiko avy amin'ny rafitra FXCC.
Ny fahafahana hampiato ny fihazana fihazana, na ny fielezan'ny fihenanam-bahoaka dia nesorina.
Amin'ny maha-mpividy broker tsy misy mangirana, tsy misy fifandonana mahaliana amin'ny mpanjifantsika. Tsy misy fepetra takiana amintsika hamehana, ka tsy misy fakam-panahy hamahana ny mpanjifantsika.
Miparitaka ny vidin'ny vidin'ny vidiny sy ny forex.
Manolotra ny toeram-pivarotana ara-barotra farany indrindra.
Eto amin'ny FXCC dia inoantsika fa ny mpanjifantsika dia tokony hanana izany rehetra izany forex trading tools Ny mpivarotra mahomby dia mila mahazo azy. Ohatra, manome ny mpanjifanay amin'ny finday hahazo alàlana izahay MetaTrader 4 software forex.
Ny tetezan-tranon'ny ECN dia ahafahantsika manolotra mpanjifa, izay mahafantatra ny MetaTrader, ny safidy hanohizana ny fampiasana azy ireo forex trading platform ao anatin'ny tontolo ECN / STP.